सरकारको पर्खाइमा विदेशी भूमिमा ७० लाख नेपाली
Thursday,09 April, 2020 | बिहीबार, २७ चैत, २०७६
रमेश भारती काठमाडौं, २३ फागुन
सरकारले कोरोना भाइरसका विषयमा आधिकारिक निर्णय नगर्दा विदेशमा रहेका नेपालीहरू दुविधामा परेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक हप्तायता वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई कोरोना प्रभावित र अप्रभावित देशमा श्रम स्वीकृति रोक्ने वा नरोक्ने भनेर आधिकारिक निर्णय गर्न सकेको छैन । यसका कारण विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक पनि अन्योलमा परेका छन् ।
श्रम मन्त्रालयले आधिकारिक निर्णय गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारमा उतै बस्ने वा स्वदेश फर्कने भन्ने विषयमा अन्योल छाएको हो ।
भारतसहित विदेशमा करिब ७० लाख नेपाली रहेको सरकारको अनुमान छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएका देशमा करिब २५ लाख नेपाली रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमान छ । हाल नेपालीहरू रोजगारीमा कार्यरत केही देशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको छ । यी देशमा रहेका नेपाली त्रासमा भए पनि सरकारले उनीहरूलाई उतै उपचार गर्न पहल गर्ने कि स्वदेश फर्काउने भन्ने निर्णय गरेको छैन ।
गत सोमबार कोरोना भाइरस प्रभावित देशमा श्रम स्वीकृति बन्द गर्ने सर्वोच्चको आदेशको पालनामा समेत आधिकारिक निर्णय मन्त्रालयले गरेको छैन । यसका कारण विदेशबाट फर्कने र जाने दोधारमा परेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले गत सोमबार संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, इरान, बहराइन, जापान, दक्षिण कोरिया, इटाली, चीनमा जाने नेपाली श्रमिकका हकमा श्रम स्वीकृति बन्द गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले मंगलबार कोरोना प्रभावित ८ देशका लागि श्रम स्वीकृति रोकेको छ ।
दक्षिण कोरियाले भने कोरियामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएपछि विदेशी श्रमिक गत हप्तादेखि नै रोकेको थियो । नेपाल सरकारले मात्र होइन, कुवेत, बहराइन र ओमानले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारण देखाउँदै केही समयका लागि नेपाली श्रमिक लिन रोक लगाएका छन् ।
हाल दैनिक ९ सयको हाराहारी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । नेपालले विश्वका १ सय १० देशका लागि संस्थागत रूपमा र व्यक्तिगततर्फ १ सय ७२ देशका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान खुला गरेको छ ।
सरकार यतिकै बसेको छैन : श्रममन्त्री यादव
विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई श्रम मन्त्रालयले सान्त्वनासमेत दिनन सकेको आरोप लागिरहेको छ ।
कोरोना प्रभावित देश दक्षिण कोरिया, जापान, मलेसिया, साउदी, कुवेत, बहराइन, कतार, यूएई, जोर्डन र ओमानले विदेशी श्रमिक ल्याउन रोक लगाइसकेका छन् । यी देशमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिएसँग सरकारले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता विषयमा जानकारी लिएको छैन ।
सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरूका बारेमा बारम्बार गम्भीर भएर चासो दिइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले दाबी गरे । सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिएसँग विदेशमा रहेका नेपाली नियोगमार्फत् त्यहाँ रहेका नेपालीहरूका बारे जानकारी लिइरहेको मन्त्री यादवले बताए ।
‘सरकार आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवारी वहन गर्न तयार छ । समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने विषयमा छलफल हुँदै छ । कोरोना भाइरस प्रभावित देशमा रहेका नियोगसँग कुराकानी भइरहेको छ’, उनले भने, ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि कोरोना भाइरसको त्रास भए पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । नेपाली भएका देशमा रहेका स्वास्थ्य विभागहरूले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सहयोग गरिरहेका पाएका छौँ ।’
कोरोनाको त्रास भएकाले सुरक्षित भएर रहन र कोरोनाबाट बच्न सबै विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मन्त्री यादवको आग्रह छ ।
यस्तै, राज्य जनतालाई साह्रोगाह्रो पर्दा आवश्यक पर्ने रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । सम्बन्धित मन्त्रालयले नियोगमार्फत् कोरोना भाइरस उपचारका लागि अथवा अन्य केही सुझाववसहित सन्देश विदेशमा रहेका नेपालीलाई दिनुपर्ने रोजगारविज्ञ डा. गुरुङले बताए ।
राज्यसँग जनताले यस्तो बेला आस गर्ने र उनीहरूलाई यस्तो समयमा राज्यले अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले कोरोना भाइरसका विषयमा औपचारिक निर्णय नगर्दा विदेशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोग पनि दोधारमा परेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका हकमा रोजगारदाता देशमै उपचार गर्ने विषयमा कूटनीतिक नियोगमार्फत् पत्राचारसमेत नगरेको नियोगहरूले बताइहेका छन् ।
नियोगमा कोरोना भाइरसको विषयमा सरकारको निर्णय सोध्न नेपालीलाई के जवाफ दिने भने अन्योल रहेको दूतावासहरूले बताएका छन् । कोरोना भाइरसबाट बच्न सूचना जारी गरेसँगै दूतावासमा धेरै नेपालीहरूको फोन आउने गरेको दूतावासहरूको भनाइ छ ।
खाडीका देश र मलेसियामा कोरोना सङ्क्रमितको संख्या भने बढ्दै गइरहेको छ । कुवेतमा ५६, बहराइनमा ५१, मलेसियामा ५०, यूएईमा २८, इजरायलमा १५, ओमानमा १५, कतारमा ८, साउदी अरेबियामा २ जना कोरोना सङ्क्रमितको उपाचार भइरहेको ती देशका स्वास्थ्य विभागले जानकारी दिएका छन् ।
यी देशमा कति विदेशी नागरिकमा कोरोना सङ्क्रमण देखा परेको छ भन्ने खुलाइएको छैन ।
यसैगरी, जापानमा ६, अमेरिकामा ११, डाइमन्ड प्रिन्सेसमा ६, फ्रान्समा ४, स्पेनमा, हङकङमा, अस्ट्रेलियमा, इराकमा २–२ जना र थाइल्यान्ड, ताइवान, सन मरिनो, फिलिपिन्समा १–१ जनाको मृत्यु भएको छ ।
हालसम्म ८४ वटा देशमा ९५ हजार जनाभन्दा बढी कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन् । यसबाट ३ हजार २ सय ८६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने आधाभन्दा बढी उपचारबाट ठीक भइसकेका छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २३, २०७६, ०१:१९:००
गण्डकीमा २५९ जनाको कोरोना नमुना संकलन, २ पोजेटिभ, १३५ नेगेटिभ
नेकपा नेता रिजालको प्रश्‍न : मुलुक प्रहरीको तलब काटेर बाँच्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको हो ?
विदेशबाट फर्केका सबैलाई क्वारेन्टाइन, घरघरमै औषधि र सुरक्षा भत्ता
'वैदेशिक रोजगारीमा गएका २० प्रतिशत श्रमिक समस्यामा छन्'
मजदुरको प्रश्नः कहाँ र कसले पाउँछन् कोरोनाको राहत ?
१ वर्ष नपुगी वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरिँदै, म्यानपावर सञ्चालकमा खुसीयाली
आप्रवासी कामदारप्रति युरोप र अमेरिका अनुदार, मध्यपूर्वी देश बढी जिम्मेवार
बाजुरामा गोली हानी एक महिलाको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
कोरोनाले यूएईमा छटपटिएको नेपाली मन
ओपोद्वारा फाइभजी आधारित भ्वाईस एण्ड भिडियो कलको सफल परीक्षण
ढुवानी गर्न समस्या हुँदा गोदाममै थन्कियो स्यानिटाइजर
भाटभटेनीद्वारा गण्डकी कोरोना राहत कोषमा २५ लाख सहयोग
संसारका यी ९ वटा देश, जहाँ छैन कोरोनाको त्रास